Pantone CAPSURE समीक्षा: के यो उपकरण रङहरू मिलाउने उत्तम तरिका हो? - Print Peppermint
Pantone CAPSURE समीक्षा: के यो उपकरण रङहरू मिलाउने उत्तम तरिका हो?
डिसेम्बर 27, 2020 | रंग, Pantone, प्रिन्ट डिजाइन
CAPSURE ™ तपाईंलाई कुनै पनि सतह वा सामग्रीबाट रंगहरू मिलाउनको लागि पोर्टेबल तरीका दिन्छ। त्यसो भए तपाई यसलाईaमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ Pantone® रंग कि तपाइँ व्यापार लोगो, डिजाइन, वा फेशन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको मार्केटि materials सामाग्री को लागी स्थिरता बनाउन को लागी एक सजिलो तरीका हो।
CAPSURE १००० भन्दा बढीको साथ आउँछ Pantone रङहरू उत्पादनमा पूर्व-लोड गरिएका छन्। यसले टाइम स्ट्याम्प र अडियो नोटहरूसँग १०० "प्रेरणा" क्याप्चरहरू पनि भण्डारण गर्न सक्छ।
A सिंक सुविधा तपाईंको लाइब्रेरीलाई नवीनतम र latestहरू स्वचालित रूपमा अपडेट गर्दछ।
यदि तपाइँ विशिष्ट कपडा वा सामाग्री मा पाइने रंगहरु बाट प्रेरित महसुस गर्नुहुन्छ, तब यो उत्पादन तपाइँ बाट निकटतम मिलान सम्भव दिनेछ Pantone रंग प्रणाली।
CAPSURE एक पोर्टेबल रंग पहचान उपकरण हो
के क्याप्सरा अनौंठो बनाउँछ कि यो छ एक बहु रंगीन बान्की भित्र विशिष्ट टोन अलग। यो दृष्टिकोणले मिल्दो वा समकालीन प्यालेट विकास गर्न धेरै सजिलो बनाउँछ। त्यसपछि यो क्रिएटिभ क्लाउड® बाट सहित धेरै डिजिटल डिजाइन कार्यक्रमहरूसँग सिंक हुन्छ Adobe®।
CAPSURE प्रयोग एक सीधा प्रक्रिया हो। जब तपाईं यसको छेउमा उपकरण समात्नुहुन्छ, तपाईं छेउमा "मापन" बटन थिच्न सक्नुहुन्छ।
उपकरणले राम्रो काम गर्दछ जब तपाईं यसलाई CAPSURE को लागि र flat नमूनाको बिरूद्ध फ्ल्याट राख्नुभयो भने मापन सही रूपमा क्याप्चर गर्न। तपाईंले प्राप्त गर्न चाहानु भएको नमूनाको केन्द्र मापन अप्टिक्सको मुनि केन्द्रीय-स्थितिमा हुनुपर्दछ। यदि तपाईं मापन बटन हल्का प्रेस गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईं नमूनाको पूर्वावलोकन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
बटनलाई दृढताका साथ समात्नुहोस्, र तपाईंले क्यामेरा जस्तो आवाज सुन्नुहुनेछ। यसको मतलब तपाईंले वास्तविक नमूना लिनुभएको छ जुन तुलना गर्न तयार छ Pantone पुस्तकालय।
तपाइँ प्रदर्शनको तल एक प्रगति पट्टी देख्नुहुनेछ। सही नमूना प्राप्त गर्न १००% सम्म नपुगेसम्म प्रयोगकर्ताहरूले उपकरण स्थिर होल्ड गर्नुपर्दछ।
Pantone CAPSURE क्षैतिज, ठाडो, र कोण किनार मा काम गर्दछ। मात्र आवश्यकता छ राम्रो, समतल सम्पर्क रंग प्राप्त गर्न को लागी तपाईले प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
जब मिल्ने प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ, तब तपाईं सन्दर्भ नाम र को संख्या प्राप्त गर्नुहुनेछ Pantone रंग हो कि यो सबैभन्दा नजिकको मेल छ। तब तपाइँ तपाइँको नयाँ डिजिटल डिजाइन र अन्य ग्राफिक्स काम मा त्यो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।
के क्याप्चर सही हुन्छ
यसले सतह अनियमितताहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिन उत्कृष्ट कार्य गर्दछ। उपकरणले सतह सपाट एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ जसले चिल्लो फ्यान डेक र बनावट मापन बीच व्यावहारिक तुलना सिर्जना गर्दछ।
यसले नमूनाबाट प्रमुख रंगहरू लिन्छ जुन मापन दृश्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट आवृत्तिको साथ एक भन्दा बढी र contains समावेश गर्दछ।
यसले क्रमशः २,,, वा mill मिलिमिटरमा सानो, मध्यम, वा ठुलो नमूना क्षेत्रहरू मापन गर्न सक्दछ। स्वचालित सेटिंगले तपाइँलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा "ठूलो" नमूना दिन्छ, जुन तपाइँ र colorको उदाहरण पनि मापन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन आकार २ मिलिमिटर भन्दा कम छ।
यसले मापन प्रक्रियाको अवधिमा पृष्ठभूमि र removing हटाएर अपारदर्शी बुनाई बिना कपडाका नमूनाहरू मापन गर्दछ।
यसले एक स्क्यानर प्रदान गर्दछ जसले RGB, CMYK, र प्रत्येक र labको लागि ल्याब मानहरू क्याप्चर गर्दछ ताकि तपाईं त्यसलाई द्रुत रूपमा व्यक्तिगत CAD अनुप्रयोगमा ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँ CAPSURE सुधार प्रयोग गर्न सक्दछ
प्रयोगकर्ताहरूको लागि कुनै फ्ल्याट क्षेत्रहरू नभएको सामग्रीबाट सही रंग नमूना प्राप्त गर्न यो लगभग असम्भव छ।
रंगहरू जुन प्रयोगकर्ताको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको उपस्थिति परिवर्तन गर्दछ एक गलत मापन लिन सक्छ। यो नतिजा प्राय: नमूनाहरूमा देखा पर्दछ जुन मोती मोती, धातु, वा फ्लेक-आधारित कलर्रन्टहरू समावेश गर्दछ।
यदि लिईएको नमूनामा फ्लोरसिंग पिग्मेन्ट समावेश गरिएको छ भने, त्यसपछि मापन परिणाम असामान्य रूपमा उज्ज्वल देखा पर्न सक्छ।
को विकल्प Pantone विचार गर्न क्याप्चर
Pantone यसको रंगहरु को लागी बजार नियन्त्रण एक उत्कृष्ट काम गरेको छ। यदि तपाइँ उनीहरुलाई तपाइँको डिजाइन मा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ र तपाइँको डिजाइन प्रेरणाहरु को मा जाने नियन्त्रण चाहानुहुन्छ, तब CAPSURE प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो उपकरण हुन गइरहेको छ।
NCS रंग स्क्यान २.० को बाहिर एक समान परिणाम प्रदान गर्दछ Pantone रंगहरु को सेट यदि तपाईं एक विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ।
यो उपकरणले कुनै पनि सपाट सतहबाट कलर छनौट गर्न उही स्क्यानि technology टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। त्यसोभए तपाईं निकटतम मेल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एनसीएस रंग संकेतन केवल सेक्सनहरूमा। यो समान उस्तै सुविधाहरूसँग आउँदछ, क्रसहेयरहरूसँग जुम समारोह सहित जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई र of्गको विशिष्ट क्षेत्रहरू अलग गर्न र स्क्यान गर्न सक्षम गर्दछ।
यदि तपाइँ सस्तो रंग मिलान समाधान को जरूरत छ, तब र sens सेन्सर को निक्स श्रृंखला को लागी अर्को विकल्प हो Pantone CAPSURE विचार गर्न।
यो तीन विकल्पहरूको साथ आउँदछ: सानो रंग रor्ग सेन्सर, एक पेशेवर संस्करण, र "QC" रंग सेन्सर।
निक्स प्रणाली तपाईंलाई यसको सतह कब्जा गर्न कुनै सतह स्क्यान गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए तपाईं भविष्यको सन्दर्भको लागि निक्स स्मार्टफोन अनुप्रयोगमा रंगहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यस विकल्पले तपाईंलाई ईमेल वा सामाजिक मिडिया मार्फत साथीहरू वा ग्राहकहरूसँग तपाईंले के फेला पार्नुहुन्छ साझा गर्न सक्षम गर्दछ।
यो पनि एक प्रदान गर्दछ नि: शुल्क रंग रूपान्तरण अनलाइन वा अनुप्रयोगमा ताकि तपाईं नजिकको हेक्स, सीएमवाइके, र आरजीबी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
DIY तरिकाहरू र रंगहरू छनौट गर्ने तरिकाहरू
र emotions्ग भावनाहरूसँग जोड्ने सजिलो तरिका हो। यसैले तपाईं मार्केटिंग उत्पादनहरूमा र color्गको विशिष्ट संयोजनहरू देख्नुहुन्छ।
र color्गको माध्यमबाट मनोवैज्ञानिक स्तरमा मानिससँग सम्पर्क गर्न यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ किनकि प्राथमिकताहरू व्यापक रूपमा फरक हुन सक्दछन्। केहि व्यक्ति नीलो, अरुले रातो मन पराउँछन्, र पहेंलो केहि सर्कलमा लोकप्रिय विकल्प हुन सक्छ।
जब व्यवसायले ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न रंगहरू छान्छ, चयनले सामान्यतया नेतृत्व टोलीको व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू समावेश गर्दछ।
व्यवसाय कार्डमा उत्तम मार्केटिंग सन्देशहरू, टेलिभिजन विज्ञापन, र डिजिटल अनुप्रयोगहरू सबै यसको विपरित प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछ।
कन्ट्रास्ट स्पेक्ट्रममा पूरक रंगहरूको प्रयोगबाट आउँदछ। यसको मतलब तपाईं म्याच सिर्जना गर्न स्पेक्ट्रमको अर्को छेउमा रहेका टोनहरू हेर्नुहुनेछ। मानवीय दर्शनले यी विपरित र colorsहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा लिन्छ, मार्केटिंग प्रयासमा जानकारीको लागि दर्ता गर्न र सम्झिनको लागि सजिलो बनाउँदछ।
पूरक र colors्गको यो सिद्धान्त यही कारण हो कि शब्द प्रसंस्करण सफ्टवेयर सेतो पृष्ठभूमिमा कालो पाठमा पूर्वनिर्धारित हुन्छ।
तपाईंको अर्को ग्राफिक्स डिजाईन गर्दा विचार गर्ने केही उदाहरणहरू नीलो र सुन्तला, रातो र हरियो, वा पहेंलो र बैजनी हुन्।
तपाईं छविहरू सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न जुन यी विपरीतहरूको आधा र आधा हो। यदि तपाईंसँग निलो पृष्ठभूमि छ, भने सुन्तलाको कुनै पनि बिट नाटकीय रूपमा बाहिर खडा हुनेछ। एक:: ratio अनुपात आधुनिक डिजाइनका साथ राम्रोसँग जोडी गर्न झुकाव छ।
मा प्रमाणित Pantone क्याप्सर
हुनत Pantone CAPSURE ले सबै सामग्रीहरूसँग काम गर्दछ, यसले छापिएका वस्तुहरूबाट नाप लिँदा अझ राम्रो गर्छ। यदि तपाइँ बारम्बार पेस्टल वा टोनहरूसँग काम गर्नुहुन्छ जुन रंगहरूको पुस्तकालय बाहिर आउँछ, तब शुद्धता कहिलेकाहीं शंकास्पद हुन सक्छ।
पातलो कपडाको प्रकाश कहिलेकाँही र color मिल्ने प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सामग्रीको माध्यमबाट आउँदछ। तपाईंको वातावरण नियन्त्रणले यस मुद्दालाई कम गर्न सक्छ।
यसको रूपमा महँगो कुनै उत्पादनमा लगानीको बारेमा चिन्ता गर्न यसलाई बुझिन्छ Pantone क्याप्सर। जब तपाइँ यति धेरै खर्च गर्नुहुन्छ, तब त्यहाँ काम हुनेछ भन्ने आशा छ। रङ सटीकता फेसन, मार्केटिङ, र थप मा लागि आवश्यक छ - यो उपकरणले तपाईंलाई आवश्यक परिणामहरू प्राप्त गर्न धेरै सजिलो बनाउन सक्छ।
World विश्वव्यापी व्यापारको लागि सर्वश्रेष्ठ डोमेन टीएलडीहरू
सामाजिक बिज् उपकरणहरू आभासी व्यापार कार्ड अनुप्रयोग: एक पूर्ण समीक्षा →